नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हेर्नुस अमेरिकामा हुरिकेन स्यान्डिको को बितन्डा !
हेर्नुस अमेरिकामा हुरिकेन स्यान्डिको को बितन्डा !
अमेरिकामा आएको हुरिकेन स्यान्डिले कुनै नेपालीलाई हालसम्म नराम्रो क्षति पुर्याउन सकेको छैन र अब यसको प्रभाब आज अपरान्ह देखी कम हुनेछ । तर जनजिबन नराम्ररी प्रभाबित भएको छ । अमेरिकी सरकार, स्थानीय सरकार, एजेन्सी हरुको साबधानीले मानिसहरुले नसोचेको क्षतिबाट अलिकती राहत पाए पनि क्षतिको आँकलन गर्न गार्हो छ । बाँकी रिपोर्ट आउँदैछ हेर्दै गर्नुहोला www.Nepalmother.com